‘प्रेम विवाह लामो समयसम्म नटिक्नुको कारण यस्तो पो रहेछ’ – Jaljala Online
Posted on July 6, 2019 Author Jaljala Online	Comment(0)
प्रेम विवाह आजको जमानामा निकै साधारण कुरा हो । तर यो शब्द सुन्नमा जति रमाइलो लाग्छ त्यती नै धेरै प्रेम कहिलेकाँही गलाको पासो बन्ने गर्दछ । ।
क शोधका अनुसार प्रेम विवाह गर्ने ८० प्रतिशत मानिसहरुको सम्बन्ध केही समयपछि सिद्धिने गर्दछ । आखिर यस्तो के गल्तीका कारण सम्बन्ध टुट्छ, यसबारे जानकारी लिऔं ।
धेरैजसो प्रेमविवाहमा विवाहभन्दा पहिले पुरुषहरु महिलासामू ठिक त्यसरी पेश आउँछन् जसरी महिलाहरु चाहन्छन् । प्रेमका कारण महिला पनि पुरुषलाई विश्वास गरिरहेका हुन्छन् । तर, यस्तो गर्नुपूर्व तपाईंले सोच्न आवश्यक छ किनभने ९० प्रतिशत पुरुषहरुले तपाईंलाई झुक्याइरहेका हुन्छन् । त्यसकारण विवाहभन्दा पहिले राम्रोसँग आफ्नो पुरुषबारे जानकारी लिनुहोस् ।
विवाह पछि जब पुरुषको असली रुप अगाडि आउँछ तब समस्या बल्झिनथाल्छ । धेरैजसो अवस्थामा विवाह पछि दुबैको परिवारको विषयमा पनि समस्या आउने गर्दछ । दुबैले यदि एक अर्काको परिवारलाई सम्मान गर्दैनन् भने कुरा झगडासम्म पुग्ने गर्दछ ।
धेरैजसो अवस्थामा पुरुषले घरको सबै जिम्मेवारी महिलामाथि थोपर्ने गर्दछन् जसका कारण पनि झगडा हुने गर्दछ । विवाह दुई मानिसबीचको सम्बन्ध हो, त्यसकारण घरको काम होस् वा अरु कुनै सबैमा दुबैको परस्पर सहयोग हुन आवश्यक छ ।
महिलाहरुलाई सधैं एउटा इच्छा हुन्छ कि, आफ्नो श्रीमानले आमाको कुरा नसुनी आफ्नो कुरा सुनोस् भन्ने इच्छा हुन्छ । यो कुराले पनि दुबैबिच झगडा हुने गर्दछ ।
ज्योतिषशास्त्रको अनुसार प्रत्येक राशिको आफ्नै केही भावनात्मक रोजाई र खुबी हुन्छन् ।
कुनै–कुनै राशिबिचको सम्वन्ध एकदमै नराम्रो हुने र उनीहरु विचको सम्वन्ध कहिन्यै राम्रो नहुने हुनाले प्रेम र विवाह गर्न नहुने सुझाव दिइन्छ । भने केही राशिहरुमा सम्बन्धमा निक्कै मेलमिलाप पनि हुने हुन्छ ।
१. मिथुन र मकर – मिथुन राशिलाई मकरको जिद्दीपन र कुनै पनि कामलाई पूरा गरेरै छोड्ने बानी एकदमै मनपर्छ । यी राशिका व्यक्ति यति प्रभावित हुन्छन्, कि मकर राशिले जस्तै जीवनशैली बनाउँने प्रयास गर्छ । यस्तो अवस्थामा मिथुन राशिले आफ्नो अस्तित्व र आत्मविश्वास गुमाउँने गर्छन् ।
२. मेष र वृश्चिक – एकतर्फी प्रेमले कसरी समस्या उत्पन्न गराउँछ भन्ने कुरा यी दुई राशिको जोडीबाट थाहा पाउँन सकिन्छ । मेष राशिका व्यक्ति वृश्चिक राशिलाई चाहेर पनि मनाउँन सक्दैनन्, टाढा पनि बस्न सक्दैनन् । मेष र वृश्चिकका राशिले चाहेर पनि प्रेम वा विवाह गर्न नहुने ज्योतिष शास्त्रको भनाई छ ।
३. वृष र धनु – वृष र धनु राशिबीच प्रेम वा विवाह सम्बन्ध भएमा तहस–नहसको स्थिति सिर्जना गर्ने बताइन्छ । बृष राशिका व्यक्तिहरु जे सोच्छन् वा जीवनमा आफूले बनाएको लक्ष्य धनु राशिले परिवर्तन गराउँने अवस्थामा आउँछ । एकातिर धनु राशिकाले वृषका लाई पूरै परिवर्तन गराउँन चाहन्छन्, तर वृष राशिका परिवर्तन हुन चाहँदैनन् । यसरी यी राशिबीच तालमेल नमिल्ने हुन्छ ।
४. कर्कट र कुम्भ – कर्कट राशिलाई झुट मनपर्दैन, जहाँ कुम्भ राशिले भने सम्बन्धमा धेरै पारदर्शिता राख्नुपर्छ भन्नेमा विश्वास गर्दैन । त्यसैले, यी राशिबीच तालमेल नमिल्ने हुन्छ र यी बीचको सम्बन्धमा झमेला आउँने बताइन्छ ।
५. सिंह र मीन – मीन राशिका व्यक्ति आफ्नै दुनियाँमा व्यस्त रहने हुन्छन, जहाँ सिंह राशिका लागि भावना देखाउँनु र महसुश गराउँनेमा विश्वास गर्छ । सिंह राशिका व्यक्ति आफ्नो जोडी आफ्नो काममा पनि ध्यान दिओस्, कामप्रति राय तथा भावना व्यक्त गरोस भन्ने चाहन्छ । तर मीन राशिका व्यक्तिले भावुक सिंह राशिकालाई वास्तविक जीवनमा ल्याउँन गाह्रो हुन्छ । यसै कारण यी दुई राशिबीच सम्बन्ध बनाउँन गाह्रो हुने बताइन्छ ।
६. कन्या र मेष – कन्या राशिका व्यक्ति प्राय शान्त स्वाभावका हुन्छन् र विवादबाट बच्न चाहन्छन्, त्यसैले धेरै जसो झगडा, विवादआदिबाट बच्न अर्कोको कुरा मान्ने गर्छन् । तर, यसको फाइदा मेष राशिले उठाउने गर्छ । यस्तो अवस्थामा मेष राशिलाई आफ्नो जोडीबाहेक अरु केही मान्दैनन् ।
७. मकर र सिंह – हावी हुनु सिंह राशिको स्वाभाविक गुण भएका कारण मकर राशिका व्यक्तिलाई सम्बन्ध बिग्रने खतराको संकेत थाहा हुन्छ । यदि सम्बन्ध नबिग्रिएमा पनि यी दुई राशिबीच खुशीले बास पाउँदैन ।
८. वृश्चिक र मिथुन – वृश्चिक राशिलाई हरेक चीज गहिराईबाट बुझ्ने बानी हुन्छ, जहाँ मिथुन राशिको व्यवहार एकदम रहस्यमयी हुने बताइन्छ । यस्तो अवस्थामा वृश्चिकलाई मिथुनप्रति विश्वास कम हुँदै जान्छ ।
९.मीन र तुला – तुला राशिका व्यक्ति प्राय आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्छ मीन राशिको आफ्नो जोडीमा निर्भर रहन्छन् । यद्यपी, मीनलाई यसप्रति खासै आपत्ति हुन्न, तर आँफूलाई तुला राशिका लागि आवश्यक रहेको ठान्ने भूल गर्छ र सम्मान नमिलेमा उनका लागि तनावको कारण बन्न सक्छ ।
१०. धनु र कर्कट – कर्कट राशिलाई आफ्नो परिवार र घरसँग निक्कै लगाव हुन्छ, तर पनि धनुका लागि यसले समस्या उत्पन्न गराउँछ । धनु राशिका व्यक्ति सँधै नयाँ सिक्ने इच्छामा हुन्छन् र कर्कट राशिलाई सुझाव दिन एकदमै मनपर्छ । यद्यपी, कर्कट राशिको व्यवहार धनु राशिलाई अधूरो लाग्छ ।
११. कुम्भ र कन्या – कुम्भ राशिका व्यक्ति थोरै स्वार्थी हुन्छन्, जहाँ कन्या राशिका व्यक्ति त्यागमयी हनुका कारण आवश्यकताभन्दा बढी आफ्नोभन्दा अरुको बारेमा चिन्ता गर्छन् । त्यस्तै, कन्या राशिले मनोविज्ञान पनि बुझ्छ, जो कुम्भ राशिको मनोस्थितिलाई बदल्ने प्रयत्न गर्छ ।
१२. तुला र वृष – आर्थिक मामिलामा यी दुवै राशिबीच एउटै प्रकारको राय हुन्छ, तर यी दुवै राशि एक–साथ रहनु असम्भव जस्तै हो । वृष राशि पैसालाई लिएर खासै बहस गर्न मान्दैन, यस कारण तुला राशिका व्यक्तिलाई वृषको साथ निभाउँन गाह्रो हुन थाल्छ ।
हाम्रो नेपाली समाजमा महिलालाई बुझ्न निकै कठिन छ भनिन्छ । किनकि महिलाले चाह्यो भने पुरुषलाई आफ्नो वसमा पार्न समय लाग्दैन, तर पुरुषले महिलालाई फकाउन नसकिने कुराको चर्चा नेपाली समाजमा यदाकदा सुनिने गरिन्छ ।
अनि नेपाली समाजमा एउटा भनाइ पनि रहेको पाइन्छ महिलालाइृ पेटमा कुरा नअड्याउने आईमाई भन्ने पनि गरिन्छ । त्यसैले तपाइँ हामीले पनि सुनेका हौला महिलालाई बुझ्न निकै अफ्ठेरो परेको हुन्छ । तर, यस्ता केही कुराहरु हुन्छन्, ती कुरा महिलाले झुक्कीएर पनि आफ्ना श्रीमान्लाई नभन्ने एक अध्यनले देखाएको छ ।
तपाईं पनि थाहा पाउनुहोस् महिलाले आफ्ना श्रीमान्सँग पनि गोप्य राख्ने यी छ कुराहरुः
१- तपाईकी श्रीमतीले तपाईलाई विहेभन्दा पहिला कति पुरुषसँग सेक्स गरेकी थिइन् भन्ने कहिल्यै बताउँदैनन् । यदि उनले मदिराजन्य पदार्थ सेवन गरेका बेला कुरा फुस्काइन् भने अर्कै कुरा हो ।
२- तपाई यो जानेर हैरानी हुनेछ कि तपाईकी पार्टनर आफ्नो बेष्टफ्रेण्डको विस्तरामा तपाईको पर्फमेन्सका बारेमा सबै कुरा बताइदिन्छन् । तर, तपाईले कहिले पनि उनलाई यस्तो कुरा शेयर गर्नुभो भने उनले इन्कार गर्नेछिन् ।
३- तपाईकी श्रीमतीसँग जतिसुकै गहिरो सम्बन्ध होस् तर, यदि उनलाई तपाईबाट कुनै दुःख पाइन् भने उनी आफ्ना पूर्व प्रेमीका बारेमा सोच्नेछिन् र तपाईको तुलना उनसँग गर्नेछिन् यो सधैं रहन्छ ।
४- श्रीमती चाहे पुरै समय तपाइसँगै बसेकी हुन् तर, उनी सधै तपाईबाट चाहुरीएको र नराम्रो त्वचालाई लुकाउने कोसिस गर्छन् ।
५- महिलाहरु सधै चाहन्छन् कि उनी जोसँग प्रेम गर्छिन् उसले दिनरात उनकै बारेमा सोच्ने गरोस् । यसकारण उनीहरु हरेक समयमा श्रीमानको ध्यान आफूतर्फ आकर्षित गर्नमा लागिरहेका हुन्छन् ।
६- श्रीमती आफ्नो श्रीमानको सधै जज गर्छिन् । उनीहरु पर्फेक्ट पार्टनरको इच्छा राख्छन् । कैयौपटक श्रीमानमाथि हुने शंकालाई दुर गर्नका लागि निकै ध्यान पुगाउँछन् ।
५ यदि तपाइँसँग रहेकी स्त्रीले तपाइँलाई अंगाली रहेको समयमा आफ्नै शरीर गह्रौं भएको जस्तो गरी कम्मर वा अन्यत्र हात राख्छिन् भने बुझ्नुस् उनलाई तपाइँसँग संसर्ग गर्न मन छ ।
अझ स्त्रीले तपाइँको ओच्छ्यानमा बसेर ‘कस्तो नरम ओच्छ्यान’ वा त्यसमा पल्टिने जस्ता ब्यवहार गर्न थालिन् भने कुरा बुझ्नुस् उनी के चाहन्छिन् ।
पहिलो यौन सम्पर्कमा के–के कुरामा ध्यान दिने ? विवाहपूर्वको यौन सम्पर्क थाहा हुन्छ कि हुँदैन ?
युवा/युवती जोसुकैमा किशोरावस्थामा पुगेसँगै विशेषतः विपरीत लिंगीसँग यौन सम्पर्क राख्ने चाहना हुन्छ । तर, वैवाहिक स्थितिमा जसरी सामाजिक तथा कानुनी तवरमा यौन सम्पर्क राख्न छुट छ, अन्य समयमा यस्तो सजिलो किसिमको स्वतन्त्रता छैन ।
विवाहपूर्व यौन सम्पर्क राखेपछि तुलनात्मक रूपमा पुरुष यौनसाथीले धोका दिने गरेको हुनाले विशेषतः प्रेमिल सम्बन्धमा रहेका जोडीले लिंग योनि सम्पर्कलाई विवाहपछिको लागि साँचेर राख्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।
तर, पनि विशेष परिस्थितिवश वा दुवैको सहमतिमा यौन सम्पर्क राख्न नसकिने भने होइन । मानिसमा कौतुहलता हुन्छ । ऊ नयाँ अनुभव सँगाल्न चाहन्छ । यस क्रममा पहिलो पटकको यौन सम्पर्क आफ्नो प्रेमिका, चिने जानेका वा व्यावसायिक यौनकर्मीसँग हुनसक्छ । उचित यौन शिक्षा एवं प्रजनन अंगको विस्तृत जानकारीको अभावमा पहिलो पटकको यौन सम्पर्क धेरैजसोका लागि त्यति सफल र सुखदायी हुँदैन । डर, त्रास, हतार, हतास तथा असुरक्षित वातावरणमा यौन सम्पर्क राख्नु पर्दा यौन सम्पर्क पूर्वको तयारीमा खासै ध्यान जाँदैन ।
विवाहपूर्वको यौन सम्पर्क
विवाहपूर्व यौन सम्पर्क राखिएको कुरा थाहा पाउन गाह्रो छ। पुरुषलाई महिलाको यौनांगबारे सामान्य जानकारी हुने भए पनि आफ्नै यौनसाथीको योनिको बनावट र स्वरूप यस्तै थियो भन्ने थाहा हुँदैन। त्यसैले सामान्य तवरले यौन सम्पर्क राखिसकेको अथवा नराखेको योनि छुट्याउन गाह्रो हुन्छ। हाइमेन (योनिच्छद) को आधार लिन सकिन्छ तर यसको क्षति अन्य कारणले पनि हुनसक्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ।
कौमार्य भंग भए पनि लचिलो योनिच्छद नच्यातिएको हुनसक्छ भने यौन सम्पर्क वेगरको अन्य शारीरिक क्रियाकलाप (साइकल चढ्दा, घोडा चढ्दा, खेलकुद) ले पनि पातलो योनिच्छद च्यातिएको हुनसक्छ। धेरैजसो विवाहपूर्वका यौन सम्पर्क योजनाबद्ध नहुन सक्छन् । यसका कारण प्रजनन जटिलता भने निम्तिन सक्दछ।
सफल यौन सुखका लागि सम्भोगको सही व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। सम्भोग व्यवस्थापनको क्रममा कतिपय कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै कि तनावरहित अवस्थामा मात्र यौन सम्पर्क गर्ने, अनावश्यक दबाबका बेला यौन सम्पर्क नराख्ने, गोप्यताको निश्चितता तथा एकान्त वातावरणमा मात्र यौन सम्बन्ध राख्ने, हतार वा थकानपछि क्रमशः शीघ्र वा ढिलो स्खलनको समस्या हुनसक्छ त्यसैले यथेष्ट आरामपछि पाकक्रीडामा पर्याप्त समय दिई यौन कार्य गर्ने, थप मादकता दिने हुनाले हल्का संगीत बजाउने त्यसै गरी दुवैका लागि स्वीकार्य पफ्र्युम लगाउने, मधुरो प्रकाशको व्यवस्था गर्ने, डर, चिन्ता र थकान मेटाउने हुनाले दुवैले हल्का मद्यपान गर्ने, यौन कार्यको केही घण्टाअघि हल्का मिष्ठान्न भोजन गर्ने, यौन कार्यअघि र पछि शारीरिक सरसफाईमा ध्यान दिने।
पहिलो पटकको यौन सम्पर्कका बेला पुरुष यौनसाथीमा लिंग उत्तेजना नहुने, शीघ्र स्खलन हुने समस्या हुनसक्छ भने महिला यौनसाथीमा गर्भ रहला कि, यौन सम्पर्कपछि धोका देला कि, कसैले थाहा पाउला कि, बेइज्जत होला कि भन्ने डरले पूर्ण रूपमा यौन सन्तुष्टि प्राप्त गर्र्न गाह्रो हुन्छ। यस्तो परिस्थितिमा पहिलो यौन सम्पर्कको क्रममा हाइमेन (योनिच्छद) च्यातिई हल्का रक्तस्राव वा रगत मिसिएको योनिस्रावले झन् त्रास उत्पन्न गराउँछ।
मानव यौन प्रतिक्रिया चक्रको सम्पूर्ण चरणहरू, यौन संवेदनशील अंगहरू, पाकक्रीडाको जानकारीको अभावमा तथा यसलाई यथेष्ट समय दिई यौन सम्पर्क नगरिँदा तालमेल नमिली पार्टनर दुवैले यौन सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्दैनन्। यसरी पहिलो गाँसमै ढुंगाको अनुभव सँगाल्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी सुरक्षित सेक्स, सुरक्षित चक्र, आकस्मिक गर्भ निरोध तथा गर्भपतनको कानुनी मान्यताको पर्याप्त जानकारी नहुँदा डरैडरमा यौन सम्पर्क राख्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न आसनको उपयोग, योनिमार्ग तथा पुरुष लिंग चिप्लो बनाउने तरिकाको जानकारीको अभावमा यौन कार्य कष्टप्रद हुन्छ।
यौन जोडीबीच एकआपसमा आफ्नो यौन चाहना, यौनेच्छा साटासाट नगरे वा एकले अर्कालाई यौन कार्यमा सहयोग नगरे पहिलो पटकको यौन सम्पर्कमा शारीरिक पक्ष बढी हाबी हुनसक्छ अर्थात् यौन कार्य केवल यान्त्रिक मात्र हुनसक्छ। तर, सफल सम्भोग कार्यमा मानसिक पक्षको भूमिका पनि उत्तिकै हुन्छ। विवाह इतरको यौन सम्बन्धमा विशेषतः महिला यौनसाथीको गोप्यताको उच्च कदर गर्नुपर्दछ।
आफ्नै प्रेमिका वा परिचित व्यक्तिसँग पहिलो पटकको यौन सम्पर्कपछि निरन्तर सम्पर्कमा रहनुपर्छ। यस क्रममा महिनावारी, यौनांगमा पीडा वा कुनै यौन समस्या वा पहिलो पटकको यौन सम्पर्कपछि कुनै तनाव, पिर, चिन्ता तथा उदासीपना छ/छैन बुझ्नु पर्छ। कुनै पनि समस्या उत्पन्न भएको खण्डमा आफ्नो यौनसाथीलाई भरपूर सहयोग गर्नुपर्छ। जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आफूले साथ दिने ढाडस दिनुपर्छ।
यस्तो कार्यबारे सम्बन्धित अभिभावकले थाहा पाएको खण्डमा गालीगलौज गर्ने, डर त्रास देखाउनेभन्दा पनि आफ्ना सन्तानलाई निश्चिन्त बनाई तिनीहरूलाई परेको समस्याको समाधान गोप्य तवरले गरिदिनुपर्दछ। यसबाट पाठ सिकी भविष्यमा नैतिक मूल्य, मान्यता कायम राख्न सल्लाह दिनुपर्छ। पहिलो पटकको यौन सम्पर्क तुलनात्मक रूपमा असुरक्षित हुनसक्छ। त्यसैले सदैव सुरक्षित सेक्सको पालना गर्नुपर्छ।
– डा. सुमनराज ताम्राकार, स्त्री तथा प्रसूति विशेषज्ञ |
महिलालाई बुझ्न निकै कठिन हुन्छ भन्ने गरिन्छ । किनकि महिलाले चाह्यो भने पुरुषलाई आफ्नो वसमा पार्न समय लाग्दैन, तर पुरुषले महिलालाई फकाउन नसकिने कुराको चर्चा नेपाली समाजमा यदाकदा सुनिने गरिन्छ । त्यसैले पनि यस सम्बन्धि केहि गीत तथा भनाई समेत छन् ।
बसमा यात्रा गर्दा वान्ता हुन्छ ? अपनाउनुहोस् यस्ता छन् घरेलु उपाय
मलाई बसमा यात्रा गर्दा वान्ता हुने समस्या छ। यो समस्याबाट छुटकारा पाउने कुनै घरेलु उपाय छैन ?
यात्रा गर्दा शरीरका इन्द्रीयहरु आँखा, कान आदिले सन्तुलित ढंगबाट आ–आफ्नो कार्य गर्न नसक्दा मोसन सिकनेस अर्थात यात्राजन्य वान्ता उत्पन्न हुन्छ। मोसन सिकनेस पनि व्यक्तिपिच्छे फरक–फरक हुन्छ। कसैलाई सवारी साधन जस्तैः– बस, ट्याक्सी, हवाईजहाज चढेको केही मिनेटमै सुरु हुन्छ भने कसैलाई घन्टौं पछि। मोसन सिकनेस भएमा यात्रा साह्रै कष्टकर हुन्छ। अतः आफ्नो यात्रा सुखदायी र रमाईलो बनाउनका लागि हाम्रै घर भान्सामा प्रयोग हुने केही प्रभावकारी घरेलु उपाय र औषधीय गुणयुक्त जडिबुटीको बारेमा जानकारी लिई राखौं।
अथवा माथि भनिएका मध्ये मौसम अनुसार काँचो आँप वा दाडिम जे उपलब्ध हुन्छ त्यही लिई त्यसको जुस बनाउने र उक्त जुसमा पुदिना, अदुवा, ल्वाङ्ग मिसाएर अलिकति नुन र सौंफको पाउडर पनि राखी यात्राका क्रममा पटक–पटक पानीका रुपमा प्रयोग गर्दा पनि मोसन सिकनेसलाई कम गर्न सकिन्छ |
आधुनिक समाजमा मागी विवाह भन्दा प्रेम बिबाह धेरै हुने गरेको पाइन्छ । तर यदि तपाईहरु मागी विवाह गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने केही महत्वपुर्ण प्रश्नहरु युवतीलाई सोध्न नभुल्नु होला ताकी पछी आफ्नो परिवारिक सम्बन्धका कुनै समस्या नआओस् ।
बिहे अघिनै एक-अर्काको आनीबानी थाहा नभएपनि त्यस सम्बन्धि सावधानी अपनाउनु निकै बुद्धिमानी हुन्छ । बिहे पछि यस्तो आनीबानी थाहा पाउनकै लागि वर्षौंसम्म लाग्न सक्छ । तर केही प्रश्न यस्ता छन् जुन प्रश्नबाट तपाई क्षण भरमै हुने जीवनसाथीको सम्पूर्ण आनीबानी थाहा पाउन सक्नुहुन्छ ।
यसले तपाईको जीवनमा नयाँ मोड ल्याउन सक्छ । विहे गर्नुभन्दा पहिला महिलालाई सोध्नुपर्ने प्रश्नहरु यस प्रकार रहेका छन् ।
१. फ्यूचर प्लानिङको बारेमा छोटो प्रतिक्रिया लिनुहोस् । उसको पहिलो प्राथमिकता के हो ? भन्ने बुझ्नुहोस् । याद गर्नुहोस् फ्यूचर प्लानिङको बारेमा उनले भनेको छोटो प्रतिक्रिया नै महत्वपूर्ण हुनसक्छ । यदी युवतीको फ्यूचर प्लानिङ बिहे अघिनै थाहा पाएमा राम्रो हुन्छ । उनले भविष्यको लागि सोचेको कुरा तपाइँलाई चित्त बुझ्दैन भने बिहे अघिनै त्यसबारे स्पष्ट आफ्नो धारणा राखेर भविष्यमा आउन सक्ने अनावश्यक विवादबाट पहिलेनै बच्न सक्नुहुन्छ ।
२. सबैभन्दा पहिला केटीको शिक्षाको बारेमा सोध्नुहोस् । सफल जीवनको पहिलो कडि नै शिक्षा हो । भनिन्छ घरमा महिला शिक्षित भए पुरै परिवार शिक्षित हुन्छ । उनको शिक्षा र उनले परिवारलाई बुझेको खण्डमा मात्र सुखी परिवार बन्न सक्छ ।
३. आर्थिक मामलामा उनको धारणा के हो त्यो पनि बुझ्नु होस् । तपाईको जिन्दगी सफल पार्नका लागि आर्थिक चिजको भूमिका पहिलो र महत्वपूर्ण हुनेगर्छ । तर याद गर्नुहोस् मनी माइन्डेट युवति छ भनेपनि तपाईको जीवन सफल नहुन सक्छ । त्यसैले पैसानै सवथोक मान्ने खालको युवती छ भने तपाइँले बिहे अघिनै सावधानी अपनाउदा पछी समस्या आउंदैन । आफ्नो सम्पति जति भएपनि बिहेअघि सम्पति धेरै छ भन्ने देखाउनु पनि राम्रो हुँदैन ।
४. उनीसँग के कुरा गर्दा नजिक हुन सकिन्छ जरुर सोध्नुहोस् । उसका साथीहरु कस्ता-कस्ता छन् ? भन्ने पनि बुझ्न आवश्यक छ । उनका साथीहरु भनेको उनले सिक्ने खुल्ला विद्यालयहरु पनि हो । किनकी उसको बाल्यकाल त्यही बितेको छ ।
५. त्यसपछि एकअर्काको रुचीहरुको बारेमा सोध्नुहोस् । रुची हेर्दा सानो-सानो देखिएपनि मानिसको संस्कार र संस्कृतिसँग जोडिएर आएको हुन्छ । तपाई यसलाई कमजोर सोच्दै नसोच्नुस् । एक अर्काको रुचीहरु मिल्यो भने मात्र जीवन सफल हुन सक्छ ।
यसकारण महिलाहरु यौन सम्बन्धमा उदासिन हुन्छन्
अक्सर महिलाहरु यौनका लागि अग्रसर हुँदैनन् । आफ्नो पाटनरलाई सन्तुष्ट राख्न मात्र उनीहरु यौन सम्बन्ध राख्छन् ।
उनीहरु पुरुषको यौन सन्तुष्टिका लागि आफुलाई समर्पण गरिरहेका हुन्छन्, भलै त्यसबाट उनीहरुले पनि आनन्द लिन सक्छन् ।
महिलाहरु उति खुल्दैनन् । उति सक्रिय हुँदैनन् । उति अग्रसर हुँदैनन् । एक अध्ययनमा भनिएको छ, पुरुषको तुलनामा महिलाहरु यौन सम्बन्ध बनाउने कुराले उदास रहन्छन् । यौनमा महिलाहरु उदासिन हुनुको बिभिन्न कारणहरु छन् :-
१. सम्बन्ध चिसिएपछि
महिलामा यौन इच्छा त्यसकारण पनि कम हुँदै जान्छ कि, जब उनीहरुको सम्बन्धमा चिसोपन आउन थाल्छ । दम्पतीबीचको सम्बन्ध सुमधुर छैन । प्रेमिल छैन । झैझगडा, मनमुटाव, भनाभन भइरहन्छ भने त्यसले महिलाको यौन जीवनमा सोझो प्रभाव पार्छ । आफ्ना पार्टनरसँग उनीहरु भावनात्मक रुपले जति टाढिदै जान्छन्, महिलाको यौन इच्छामा पनि ह्रास आउन थाल्छ ।
यसका साथै पार्टनरको यौन समस्या, भावनात्मक सन्तुष्टि नमिल्नु र बच्चाको जन्म पनि यसको कारण हुनसक्छ ।
२. पारिवारिक दायित्व भार
अक्सर हामीकहाँ महिलाहरु घर धन्दाको काममा बढी व्यस्त हुन्छन् । विवाह गरेपछि उनीहरुलाई घर परिवार सम्हाल्ने अभिभारा दिइन्छ । खाना पकाउने, ख्वाउने, नानी स्यहार्ने, लुगाफाटो धुने, घर सफा गर्ने, किनमेल गर्ने जस्ता अनगिन्ती कामको भार उनीहरुको काँधमा थमाइन्छ ।
अझ अहिले धेरै महिला कामकाजी छन् । उनीहरुले आफ्नो पेशा व्यवसाय पनि सम्हाल्नुपर्ने, अर्कोतिर घरधन्दाको काम पनि भ्याउनुपर्ने दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी कामको चापले उनीहरुमा यौन चाहना घट्दै जान्छ ।
दिनभरको कामले थकित हुन्छन् । राती शरीरले विश्राम माग्छ । अन्य समय पार्टनरसँग अन्तरंग पल विताउने फुर्सद र अनुकुलता हुँदैन । यसले गर्दा पनि महिलामा यौन चाहना कम हुन्छ ।
३. घरायसी माहौल
घरमा सासु-ससुरा, देवर-देवरानी, छोराछोरी हुन्छन् । उनीहरुको आँखा छलेर अन्तरंग पल साट्ने अनुकुलता मिल्दैन । अझ बालबच्चा भइसकेको अवस्थामा त महिलाहरुको भूमिका थप बढ्न थाल्छ । बालबच्चा हुर्काउने, स्यहार्ने कुरामा उनीहरु केन्दि्रत हुन्छन् । राती छोराछोरी स्यहार्नुपर्ने, सुताउनु पर्ने जस्ता अतिरिक्त जिम्मेवारी आइलाग्छ । यस्तो माहौलमा महिलाहरु उन्मुक्त ढंगले यौन क्रियामा सहभागी हुँदैनन् । पुरुषको तुलनामा उनीहरु बढी लजाउने स्वभावका हुन्छन् । उनीहरु स्वतन्त्र एवं एकान्तमा जति खुल्छन्, त्यती खुल्न सक्दैनन् । यसले पनि उनीहरुको यौन जीवनमा प्रभाव पार्छ ।
४. प्रजनन स्वास्थ्यको कारण
महिलाहरुको प्रजनन अंग निकै संवेदनशिल हुन्छ । मासिक श्राव, गर्भाधान, प्रसूती जस्ता अनेक चरणबाट उनीहरु गुजि्रनुपर्ने हुन्छ । यस क्रममा उनीहरुको प्रजनन अंगमा कतिपय संक्रमण हुनसक्छ । कतिपय समस्या आउन सक्छ । यसरी प्रजनन अंगमा देखापर्ने समस्याले पनि उनीहरुको यौन रुचीमा असर गर्छ ।
५. टेस्टोरनको स्तर
महिलामा टेस्टोरनको स्तर २० बर्षको अवस्थामा बढी हुन्छ र त्यसपछि क्रमस कम हुँदै जान्छ । यसले गर्दा पनि महिलामा यौन इच्छा कम हुन्छ ।
६. मेडिकल समस्या
महिलाहरु यौनमा अनुदार एवं उदासिन हुँदै गएका छन् भने त्यसमा अरु पनि कारण हुनसक्छ । जस्तो कि, उनीहरु तनावग्रस्त हुनसक्छन् । उनीहरुमा थाइराइडको समस्या हुनसक्छ । एनिमिया व मधुमेहले पनि त्यस किसिमको समस्या आउन सक्छ ।
७. गर्भनिरोधक चक्की
महिलाको यौन जीवनमा प्रभाव पार्ने अर्को तत्व हो, गर्भनिरोधक चक्की । अनिच्छित गर्भ रोक्नका लागि सेवन गरिने यस्ता चक्कीले उनीहरुमा यौनप्रतिको रुची कम गराउँछ ।
८. बाल्यकालको खराब याद
कतिपय महिलाले बाल्यकालमा यौन उत्पीडन झेलेका हुन्छन् । बाल्यकाल वा किशोरावस्थामा उनीहरुले झेल्ने यस्तै पीडाले पनि उनीहरुमा यौन रुची घट्न थाल्छ । उनीहरु जसै यौन सम्बन्धका लागि तयार हुन्छन्, विगतको पीडादायक क्षणको यादले उनीहरुलाई झस्काइदिन्छ ।
.९ बढ्दो उमेर
महिलाहरुमा उमेर बढ्दै गएपछि एन्ड्रोजनको स्तर कम हुन्छ । यसले गर्दा पनि उनीहरुमा यौन रुची घट्न थाल्छ । यसका साथै हर्मोन्सको असन्तुलन वा शरीरमा ल्यूटिनिसिंग हर्मोन्सको कमीले महिलामा यौन इच्छा कम हुन्छ ।
यी ५ अवस्थामा नुहाउन कहिल्यै नबिर्सनुस !
नुहाउनु शारीरिक स्वच्छता हो । त्यसमा पनि कतिपय अवस्थामा नुहाउनु सारीरिक फुर्तिपनाको लागि राम्रो मानिन्छ ।
हिन्दु शास्त्र अनुसार आफ्नो जीवन चलाउन चाहने मानिसले दैनिक ३ पटकसम्म नुहाउनु पर्छ भनि शास्त्रहरुमा उल्लेख छ । नुहाउँदा धार्मिक र शारीरिक शक्तिहरुलाई बल मिल्ने शास्त्रहरुमा उल्लेख छ । यस्तै नुहाउँदा मांसपेशी बलियो हुने र मस्तिष्क ताजा हुन्छ ।
हिन्दू शास्त्रमा पूरै शरीर ननुहाएर हात–खुट्टा मात्रै धुनलाई पनि महत्व दिइएको छ । शास्त्र अनुसार यि काम गरिसकेपछि नुहाउनु पर्छ भनि उल्लेख छ । महान दार्शनिक तथा सम्राट चन्द्रगुप्त्का सल्लाहकार थिए । उनले अर्थशांस्त्र, राजनीति शांस्त्र आदिका महान ग्रन्थ लेखेका थिए । उनले जीवनमा जुन-जुन अनुभव प्राप्त गरे, जुन नियम बनाए ती आज पनि उत्तिकै प्रचलित र समय सान्दर्भिक लागु भएका छन् । उनले आफ्नो कुटनीतिक बलले एक सामान्य बालक चन्द्रगुप्तलाई विशाल भारतको सम्राट बनाएका थिए । उनको भनाईहरु आज पनि सर्वत्र चर्चामा छन् ।
१. चाणक्यअनुसार, शवयात्रा अथवा अन्तिम संस्कारबाट फर्किएपछि घरमा प्रवेश गर्नुअघि नुहाउनु पर्छ । चाणक्य प्राचिन समयका एक
२. चाणक्यका अनुसार, सम्भोगपछि नुहाउनु आवश्यक हुन्छ । जीव विज्ञान अनुसार सम्भोग आनुवंशीक लक्षणहरुको संयोजन र मिश्रणको एक प्रक्रिया हो, जुन जीवनको भाले वा पोथी हुनुले निर्धारित गर्दछ । सम्भोग कृया थाल्नु अघि नुहाउने, दाँत माझ्ने एवम् उपयुक्त लुगा लगाउनु राम्रो मानिन्छ । चाणक्यको अनुसार स्वास्थ्यनै ठुलो धन हो । हिन्दु धर्ममा शारीरिक र आत्मिक स्वस्छताका लागि मानिसले सम्भोगपछी नुहाउनु पर्दछ । सम्भोग पछी ननुहाई कुनैपनि धार्मिक कृयामा शामिल हुनु राम्रो मानिन्न ।
३. हप्तामा एक पटक पूरै शरिरलाई तेलले मालिस गर्न आवश्यक छ । यस्तै तेलले मालिस गरेपछि नुहाउन एकदमै राम्रो मानिन्छ ।
४. कपाल काटेपछि नुहाउनु पर्छ ।
५. मन्दीरमा पुजा गर्नु जानु भन्दा अगाडी नुहाउनु पर्छ ।
यस्तो अवस्थामा जीवनसाथी आफूले चाहेको र मनपराएको जस्तो नहुन सक्छ । कतिपय बढी उमेरका हुने गरेको पाइन्छ भने कतिपयको रुपरंग मन नपर्ने खालको हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा पत्नीहरु पतिप्रति विकर्षित र परपुरुषप्रति आकर्षित हुने जोखिम बढ्छ ।
बहुउपयोगी पुदिनाका २५ फाइदा यस्ता छन्, पढ्नुहोस
Posted on September 21, 2019 Author Jaljala Online
करेसाबारीमा सजिलै उम्रने तथा बिना मलजल पनि सजिलै मौलाउने पुदिनाको सेवन मानव स्थास्थका लागि निकै उपयोगि छ । औषधीय गुण भरीएको पुदिनाको पातमा विभिन्न रोग निवारण गर्ने क्षमता हुन्छ । पुदिनामा प्रचुर मात्रामा भिटामिन सी हुने भएकाले यसले जस्तै थकित मानिसलाई पनि फ्रेस बनाउने गर्दछ । आजकाल चुईगम, दन्तमन्जन तथा माउथफ्रेसमा समेत पुदिनालाई प्रयोग गरिन्छ […]
आज २०७६ भदौ १५ गते आइतबारको राशिफल, तपाइको कस्तो छ ? पढ्नुहोस
Posted on September 1, 2019 Author Jaljala Online
आज २०७६ भदौ १५ गते आइतबार। ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिष एस्ट्रोलोजर राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ- मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ सामाजिक कार्यबाट प्रसिद्धि कमाइने छ […]
Posted on November 4, 2019 November 4, 2019 Author Jaljala Online
गाडी चलाउँदा प्रायजसो चालकहरूलाई ब्रेक पहिला थिच्ने कि क्लच भन्ने विषयमा कन्फ्यिूजन हुन्छ । अनुभवी चालकलाई भन्दा नयाँ चालकलाई यस्तो समस्याले अधिक सताउने गर्छ । क्लच र ब्रेक मिलाएर प्रयोग गर्न जानिएन भने यसको असर इन्जिन, गियरबक्स तथा क्लचमा समस्या हुनसक्छ । दुर्घटनाको जोखिम बढ्छ । यसको लागि क्लचको काम के हो पहिला बुझ्न जरुरी […]
यी हुन ट्राफिक प्रहरीले चालकलाई बढी चिट काट्ने रुट, पढ्नुहोस
चर्चित लोकदोहोरी बाल गायिका कमला घिमिरेको गीत ‘चिया छानेको’ सार्वजनिक (भिडियो)